मलेसियाले आर्जेको सिर्जनाः ‘पार्सल’
–प्रकाश दिप्साली राई
हामी वैदेशिक रोजगारीका निम्ति भनेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भित्रिन्छौँ, तब हाम्रो अर्को दुनियाँ सुरु हुन्छ । हामी लक्षित गन्तव्यमा पुगेपछिको दैनिकीको कुरा गरिसाध्य हुन्न । त्यो दैनिकीबीच आफ्नो मुख्य ध्येय त पैसा कमाउनु हो । अन्य कुराहरू कैफियत हुन् । पहिलो पल्टको प्रवास झनै कष्टकर हुन्छ । यहाँसम्म कि कविताको ‘क’ सम्म वास्ता नगर्नेहरू कवि बन्छन् । गाउँघरको याद, परिवारको सम्झना, रिङ्गटो घुमिञ्जेल मेसिनसँगैको दौड, मेसिनसँगको पौँठेजोरी..... । सायद प्रवासको लेखन आधार यी नै हुनुपर्छ । त्यसो त प्रवासबाट लेखिएका कृति वा अभियानहरू नेपाली साहित्यमा कोसेढुङ्गा सावित भएको प्रशस्तै उदाहरण छन् । ती कुराहरूको धेरै ठाउँ उल्लेख गरिसकेको हुनाले यहाँ उठान गर्न उचित नहोला ।
नेपाली साहित्यका निम्ति विभिन्न देश (प्रवासी नेपाली) हरू साहित्य सिर्जनामा सक्रिय छन् । त्यसमध्ये पनि मलेसिया त नेपाली साहित्य सिर्जनाका निमित्त उर्वरभूमि नै, यसमा दुईमतै छैन । आ–आफ्नै छिटफुट ढङ्गले सिर्जना गरिए तापनि २०६२–६३ सालतिर प्रवासी नेपाली साहित्यिक मञ्च मलेसियाको स्थापनापश्चात् संस्थागत रूपमा त्यहाँको सिर्जना कर्मले उचाइ लिएको पाइन्छ । यो पङ्क्तिकारलाई सम्झना छ–रमेश तुफान, चन्द्र झापाली, इन्द्र नारथुङ्गे, कोपिला गौतम, राज रोबर्ट अजनबी सुब्बा, देवेन्द्र खापुङ, दिलिप ‘सगर’ राई, गणेश खड्का, मनि राई ‘गोठाले’, राम नशा, रुद्र कार्की प्रज्वल, राज मादेन ‘दीन–दुःखी’ लगायतले सिर्जना कर्ममा पसिना बगाएका छन् र नै मलेसियामा नेपाली साहित्य सिर्जना मौलाएको फस्टाएको पाइन्छ । त्यहाँबाट केही आयामका निम्ति हिम्मत पनि नगरिएका होइनन् । ‘केस्रा’ विधा लगभग स्थापित भइसकेको अवस्था थियो । तर खै के चाँजोपाँजो मिलेन ? अहिले चकमन्न छ । त्यहाँबाट साहित्यिक कृति तथा पत्रपत्रिकाहरू पनि प्रशस्तै प्रकाशन भएका छन् । जस्तैः पालामको राजकुमारी, नुरी, बिम्ब, बिम्ब गजल सङ्ग्रह, मुग्लानी चिनो (स्मारिका), नयन, आगमन, प्रवासी आवाजलगायत ।
मलेसियाको नेपाली साहित्यलाई आजको उचाइमा ल्याइपु¥याउन उल्लेख्य भूमिका खेल्ने अभियन्ताहरूमध्ये एक हुन् जीवन देवान ‘गाउँले’ । यो पङ्क्तिकारले पनि मलेसियामा पसिना बगाएको छ, दुई–चार थोपा मसी पोखेको छ । यी कुराहरू लेख्दै गरौँला । प्रवासी नेपाली साहित्यिक मञ्च मलेसियाको दोस्रो अध्यक्ष बनेका जीवनजीले मलेसियाको भूमिलाई नेपाली सिर्जनाले मग्मगाउँदो बनाउन निरन्तर लागिपरे । प्रवासी नेपाली साहित्यिक मञ्च मलेसिया त्यो संस्था हो, जसले लाखौँ श्रमिक सर्जकहरूलाई मन मुटुमा जोड्ने सेतुको काम गरेको थियो । सायद उनैको पालामा हुनुपर्छ, मञ्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज मलेसिया च्याप्टर बनाएको । जसले मलेसियाको सिर्जना कर्मलाई आकासजस्तै फराकिलो बनाउन भूमिका खेल्यो । जीवनजीको मलेसिया बसाइले निरन्तरता पाएको लगभग दुई दशक नाघेछ क्यार । त्यहाँको बसाइ, भोगाइहरू र साहित्यिक गतिविधि सँगसँगै आफ्नो लेखनलाई पनि उत्तिकै निखार्न तत्पर रहि रहे र नै लेखे ‘पार्सल’ कथा सङ्ग्रह ।
‘पार्सल’ भित्रका कथाहरू ठूल्ठूला सपनाहरू बोकेर मलेसिया टेकेका जीवनकै सबैभन्दा ऊर्जाशील समयका कथा व्यथाहरू हुन् । कथाकार गाउँलेले ‘पार्सल’ मा मलेसियामा रहेका तन्नेरीहरूको मनोदशा सर्लक्कै उतारेका छन् । मलेसियासँग यो पङ्क्तिकारको नि कयौँ किस्साहरू छन् । ती किस्साहरू विस्तारै ओकल्दै जाउँला । माथि पनि कतै भनेँ हँुला घर देशमा देखेको सपना र खाडी मुलुकमा ओर्लेपछिको भोगाइ त आकाशपातलै फरक हुन्छ ।
केही कथंकदाचित सपनाले मेल खायो भने त्यो अपवाद हो । नत्र त परदेश जानु भनेको अनेक हण्डर भोग्नु नै हो । कथाकारले कथाको आरम्भ नै ‘अरपे’ कथाबाट गरेका छन् । यो कथाले नेपाली समाजको अरब जानेहरूप्रतिको दृष्टिकोणलाई मिहीन ढङ्गले चित्रण गरेको छ । दुई–चार पैसा कमाएपछि अरपेहरूको रवाफ, अरब जानुभन्दा अगाडिको मान्छे र अरबबाट एक–दुई पैसा कमाएपछि समाजले गर्ने व्यवहार बडो रोमाञ्चक छ भने अर्कातिर अरपे हुँदा त्यसको नकारात्मक पक्षहरूलाई पाठकहरूको मन छुने ढङ्गबाट कलमको मसी सिञ्चित गरेका छन् कथाकारले ।
अर्को ‘मिसकल’ कथा हामी धेरैले भोग्ने कथा हो । यो कथाले सम्भवतः आमप्रवासी पाठकहरूलाई पक्कै रुवाएको हुनुपर्छ । कथामा ‘अवशेष’ त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, हामीले आफ्नैअगाडि कयौँ त्यस्ता घटनाहरू भोगेका र देखेका छौं । कति ठूल्ठूला सपनाहरू पोको पारेर मलेसिया (परदेश) को भूमि टेकिएको हुन्छ, तर त्यो तन्नेरी सपना राति सुतेकै बेला फुस्स परलोक हुन्छ । त्योभन्दा अर्को पीडा के हुन्छ ? अझ त्यहाँका नेपाली पत्रपत्रिकाहरूको समाचार नै ५–१० प्रतिशत नेपालीहरू सुतेको सुत्यै र नेपाली कर्मठ युवाहरूको सपना तुहिएको हुने गर्दछ ।
योसँगै वास्तवमा केही युवाहरूको परदेशीनु रहर वा सपना भए नि कतिपय चाहिँ देशको व्यवस्था, राजनैतिक असन्तुलन, अदूरदर्शी नेताहरूको अहम्ताले परदेशिनु परेको छ, आफ्नै देशको सेवा गर्ने रहर भएर पनि । नत्र देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम भएको भए गा.वि.स. अध्यक्ष भैसकेको अवशेष यसरी परदेशिने थिएनन् । सेना र विद्रोही माओवादीको चपेटामा परेका लाखौँ लाख युवाहरूको प्रतिनिधि हो यो कथा । अहिले पनि यो देशको व्यवस्था, राजनीति चाकरीको कारण अवशेष जस्ता कयौँ दक्ष जनशक्तिहरू परदेशिनु परेको छ र अनेक बहानामा उतै प्राण त्यागेर बाकसमा अकल्पनीय ‘पार्सल’ बनेर फिर्नु परेको छ । र पनि यो हाम्रो कथा हो । यी यस्ता घटनाहरूले त्यहाँ रहेका कयौँ नेपाली श्रमिकहरूलाई मानसिक पीडा दिने गर्दछ । त्यो मानसिकताका बीच अनेकौँ शङ्काको घेरामा रहेर काम गर्न बाध्य छन् नेपाली श्रमिकहरू ।
अर्को कवि कलाकार तथा लेखकहरूका निम्ति रोचक कथा चाहिँ ‘एक पात्र’ हो । कथामा एकातिर आफ्नो शुभेच्छुक (फ्यान) हरूले कवि लेखकलाई दिएको मान मनितो देखाउन खोजिएको छ भने अर्कोतिर फ्यानहरूले भोग्ने पीडाहरू उजागर गरिएको छ । हिजोको दिनमा मलेसियाको बजार वा पार्कतिर एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई देख्दा वा भेट्दा जति चिज (महŒव) हुन्थ्यो ? तर पछिल्लो अवस्थामा एक–अर्कामा विश्वासघातको बढ्दो शृङ्खलाका कारण आफू–आफूमा वितृष्णा जागेको छ ।
‘म’ पात्रको शुभेच्छुकले नेपाली होटल छाडेर ‘म्याकडोनाल्स’ मा म पात्रलाई बोलाउनु यसको उदाहरण हो । एउटा नेपालीकै कारण अर्को नेपालीले परदेशमा कतिसम्म दुःख पाएका छन् ? भन्ने कुरालाई पनि रहस्योद्घाटन गरेका छन् कथाकारले । अन्त्यमा मलेसियन पुलिस देख्ने बित्तिकै बिचरा ‘ऊ’ पात्र हतास भएर भाग्नु । योभन्दा परदेश बसाइको पीडा के हुन सक्छ ? हामीले भोगेका दैनिकीहरू नै उत्कृष्ट सिर्जना हो । किनकि त्यो कठिनताका बीच पनि ‘ऊ’ पात्र कथा फुहुराईहन्छ र आफ्ना प्रिय कथाकार ‘म’ पात्रलाई देखाइरहन्छ ।
जो कोहीलाई भावविह्वल बनाउने अर्को कथा हो ‘सुयोग’ । यो कथा प्रेमको आदर्श बोकेको कथा हो । ‘सिमरन’ र ‘सुयोग’ को प्रेमिल जोडीले प्रेमको नाउ (डुङ्गा)मा सयर गर्दागर्दै उनीहरूको प्रेम उत्सवमा एक्कासि बज्रपात आइपर्दा जो कोही पाठक पनि भावुक हुन्छन् नै । साथै हामी स–साना गल्तीका कारण कति ठूलो दुर्घटना भोग्न विवश हुन्छौँ भन्ने तीतो यथार्थलाई प्रष्फुटित गरिएको छ । सिमरन पाठेघरको क्यान्सरको कारण अल्पायुमै अन्तिम धड्कन धड्किँदैै गर्दा कुन प्रेमीहरू भक्कानिदैनन् होला ? यो कथाको उठानीले जति आनन्द वा खुशी दिलाउँछ, वैठानमा पाठकलाई ऐठन पनि उत्तिकै पार्छ ।
कथा सङ्ग्रहको शीर्ष कथा ‘पार्सल’ अर्को मन छुने पठनीय कथा हो । यस्ता कथाहरू लेख्दा कथाकारले निक्कै चनाखो भएर लेख्नुपर्छ । सङ्ग्रहकै नाममाथि कथा लेख्दै गर्दा एउटा कथाकारको लेखन हैसियतसँग जोडिने गर्दछ । यो सङ्ग्रहका अन्य कथाहरूले झण्डै जित्न खोजेको छ पार्सललाई तर, कथाकारले विवेक पुराउँदै यो कथालाई पठनीय बनाएका छन् । जब एउटा मस्त तन्नेरी छोरो परदेशिन्छ, तब आफ्ना ती सन्तानमाथि परिवारले ठूलो सपना देखेका हुन्छन् । सुख, खुशी र शान्तिको सास फेर्ने परिकल्पना गरेका हुन्छन् । तर, परदेश कहाँ त्यति सहज छ र ? अनेकौँ कष्ट नहुने कुरै छैन । मरुभूमिको बालुवाघारीमा पसिना बगाएर वसन्त उमार्नु छ । झण्डै ४० देखि ५०–५५ डिग्रीको बगरमा भेडाबाख्रा र ऊँट चराएर आफू अघाउनु छ र रेमिट्यान्सले देशलाई बचाउनु छ । त्यति सहज छैन ती कामहरू ।
अझ मलेसियामा त आफ्नैबाट लुटिने ठाउँ, मेनपावरमा एउटा काममा हस्ताक्षर गरेर कम्पनी पुगेपछि अर्कै काम गर्नु पर्ने बाध्यता । भने जस्तो नभएपछि इल्लिगल हुनुपर्ने, अनेकौँ विकृति । यी र यस्तै समस्याहरू बीच एउटा नेपालीले भोगेको पीडा हो यो कथा । ‘बिरेन’ को भाइ मेनपावर र कम्पनीअनुसारको काम र कमाइ नभएपछि भागेर काम गरेको, र भागेर जीवन बिताउँदै गर्दा नै उनको हत्या भएको छ । भाइको लास नेपाल ल्याउन नपाएर उतै दाहसंस्कार गर्नु परेको पीडा, अस्तु समेत ल्याउन नमिल्दा भाइको खरानी पोको पारेर आफ्नो सग्लो भाइ सम्झेर बुबाआमालाई जिम्मा दिनु पर्दाको दृश्य भनेर साध्य छैन ।
अनि बुबाआमा पनि त्यही एक पोको खरानीलाई जिउँदो छोरा सम्झेर लठ्ठी टेकेर पर्खनु, त्यो बेला कुन बुबाआमाले मन थामिएला ? बडो हृदयविदारक छ पीडा । यो कथा पढ्दा लाग्छ म थिएटरमा नाटक हेर्दैछु । त्यसरी बगेको छ यो कथाको घटनाक्रम । अर्कोतिर सोचे जस्तो उपलब्धि हात नपरेपछि घर पुग्दाको अवस्थाको मनोविज्ञानलाई कलात्मक शैलीमा उतारेका छन् । ‘म’ पात्रमध्ये रातमा मात्रै घर जाने आँट गर्नु, घर पुग्दा आफ्नी श्रीमतीले ‘किन हिम्मत हार्नुहुन्छ ?’ भनेर दिएको ढाडस खुब आनन्दीको छ तर, रमाइलो चाहिँ त्यो ‘म’ पात्रको आनन्दी सपना हुन्छ ।
यसरी कथाकारले ‘पार्सल’ कथा सङ्ग्रहभित्र १२ वटा कथाहरू अटाएका छन् । छोटो बसाइमा नि पढिसकिने खालका कथा भएकोले जो कोही पाठकले चासोका साथ पढ्न सक्छन् । परदेशमा भोग्नु परेको समग्र अनुभूति हो ‘पार्सल’ सङ्ग्रह । समीक्षाको ढङ्गले यी कथाहरूलाई हेर्ने हिम्मतसम्म गर्न सकिनँ, बरु कथाहरूका पात्रमा ‘आफू’ स्वयम्लाई भेटिरहेँ किनकि कथाकारले जिएको र लेखेको माटोमा स्वयम् म पनि जीवनको परिभाषा खोज्न कुनै कालखण्डमा अलमलिएकोे छु । ‘पार्सल’ मलेसियामा सिर्जना भएका सुन्दर कृतिहरूमध्ये एक हो । पछिल्लो पुस्ताको पठन संस्कृतिको मनोभाव बुझिएर लेखिएको कृति हो ‘पार्सल’ । अन्त्यमा, कथाकार जीवन देवान ‘गाउँले’ को ‘पार्सल’ जस्तै अन्य सुन्दर तथा सशक्त कृतिहरू पनि पढ्न पाऊँ, शुभेच्छा ।
इटहरी चोक सरसफाईमा ब ...
इटहरी । बुल्स इलेभेन क्लबले इटहरीको मुख्यचौक आसपासमा सर ...
काङ्ग्रेसको चौधौं मह ...
इटहरी । नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न चौधौं महाधिवेशनका कारण ...
आकाशे पुल निर्माणमा ...
विराटनगर । विराटनगरमा आकाशे पुल निर्माणमा नेताहरूले नै ...
२७ वर्षको श्रेय तपाई ...
आजबाट हामी २७ औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । एक प्रकारले ...
इटहरी चोक सरसफाईमा बुल्स इलेभेनको सक्रियता
काङ्ग्रेसको चौधौं महाधिवेशनः नगर अधिवेशनमा टिमबाटै विद्रोह
आकाशे पुल निर्माणमा नेताकै अवरोध
२७ वर्षको श्रेय तपाईंहरू
अफगानिस्तानसम्वन्धी विवाद कारण नेदरल्याण्डका रक्षा मन्त्रीद्वारा राजीनामा